Maso be tsy mahita, mpivadi-belirano • AoRaha
Maso be tsy mahita, mpivadi-belirano
Mihevitra ny olom-pirenena ho kentrina sy dondrona mihitsy ireo mpanao politika. Ireo kandidà depiote, izay zatra mamadika palitao ankitsirano no tiana horesahana eto.
Miharihary toy ny vay an-kandrina fa maro amin’izy ireo no miovaova loko toy ny tanalahy, kanefa dia mbola te ho
tompon’andraikitra ambony eto amin’ny firenena.
Tsy mitaingina soavaly maty tokoa ny mpanao politika saingy mamoehatra loatra raha ny zava-misy ankehitriny. Misy amin’izy ireo no tsy very mandeha tao anatin’ireo fitondrana nifanesy noho ny fisolelahana sy ny tombontsoa manokana. Sahin’izy ireo mihitsy ny mitsipaka am-bavafo, rehefa hita fa ho lany ny paiso an-kady. Miharihary ihany koa izao ny fanapahan-kevitra noraisin’ny Fitsarana avo momba ny Lalàm-panorenana sahy nanongana loholona iray izay nivadika tamin’ny antoko politika nisy azy, ka lasa nanatevina ny antokon’ny fitondrana ankehitriny.
Any amin’ny olom-pirenena mpifidy izany izao no baolina. Iaraha-mahalala ny zava-nitranga teto amin’ny firenena vokatry ny nataon’ireo olom-boafidy mpiovaova palitao ireo. Misy tamin’ireo kandidà depiote ireo aza no hitam-poko hitam-pirenena nandray volabe teny Ivato, nentina nandaniana ny lalàm-pifidianana, ka nampifarana hatreo ny tantaran’ny fitondrana HVM. Rehefa hitan’izy ireo anefa fa an-dohalika ny ranom-bary, dia sahy nivadi-belirano indray. Asa, lany olomanga koa angamba, ny fitondrana ankehitriny, matoa vonon-kanohana azy ireny, na mivantana na an-kolaka? Inona moa izany fa dia mody atao masobe tsy mahita tsotra izao ity raharaham-pirenena ity, ka na dia hita fa mpivadi-belirano izao aza dia ekena satria seza ihany koa tsy maintsy arovana e! Mahavariana fa velirano no dradradradraina nefa ireo mpivadi-belirano indray no lasa akamakama!
Maso be tsy mahita, mpivadi-belirano - ewa.mg dit :
15/05/2019 à 07:44
[…] Maso be tsy mahita, mpivadi-belirano est apparu en premier sur […]
15/05/2019 à 15:30
ny vahoaka malagasy dia efa tonga saina , ary hifidy ireo deputé , izay hita fa tena niasa sy nahavita nijery ny fiainam-bahoaka. tsy tombotsoan’olo-tokana no jerena fa ny tombotsoam-pirenena. ary koa raha maniry ny hahita an’ny madagasikara mandroso , dia aleo misafidy ireo candidat izay miaraka amin’ny filoha andry rajoelina